ग्लोबल आइएमई बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन : कति पाइन्छ ब्याज ? | शुभयुग
ग्लोबल आइएमई बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन : कति पाइन्छ ब्याज ?
८२८ पाठक संख्या
१६ चैत्र,काठमाण्डौं – ग्लोबल आइएमई बैंकको १० वर्ष अवधिको ‘८.५० ग्लोबल आइएमई बैंक डिबेन्चर २०८६/८७’ नाममा ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन हो ।
बैंकले चैत १ देखि ३० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गरेको छ । उक्त ऋणपत्र मध्ये १८ लाख कित्ता बैंक आफैले विभिन्न संघ संस्थालाई बिक्री गर्ने भएको छ भने बाँकी १२ लाख इकाई सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको छ । जसमा सामूहिक लगानी कोषलाई ६० हजार रहेको छ भने ११ लाख ४० हजार कित्तामा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
प्रति कित्ता एक हजार रुपैयाँका दरले न्यूनतम २५ देखि अधिकतम १० लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने छ । यसमा बार्षिक ८.५० प्रतिशत ब्याज पाइनेछ । ऋणपत्रमा सी-आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयरबाट आवेदन दिन सकिने छ । यसको बिक्री प्रबन्धकमा सेञ्चुरी क्यापिटल रहेको छ ।